ညီနေမင်း: ဒီ error ပေါ်နေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ
အပေါ်က error ပေါ်လာတဲ့သူများအတွက်ပါ .. ဘာ့ကြောင့် ဒီ error ပေါ်လဲဆိုရင် window XP SP2 သုံးတဲ့သူများအတွက် xp sp2 က Realtek HD Audio Control Panel ကို လက်မခံတာပါ . ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အခါ အခုလိုပေါ်ပါတယ် . အဲ့ဒီ့အတွက် microsoft က တင်ပေးတဲ့ ဖိုင်ကို downlaod လုပ်ပြီး ဖြေရှင်းလဲရသလို realtek ကို updating လုပ်တဲ့နည်းနဲ့လဲ ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ် ..
ပထမတစ်နည်းက microsoft က တင်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို Download လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ . Download လုပ်ဖို့အတွက် ဒီကို သွားလိုက်ပါ .
နောက်တစ်နည်းက အခုလက်ရှိ သုံးနေတဲ့ realtek ကို update လုပ်ဖို့အတွက် ဒီကို သွားပြီး High Definition Audio Codecs (Software) ကို download လုပ်ပါ ..
မလုပ်တတ်ရင် High Definition Audio Codecs (Software) ကို ကလစ်လိုက်ပါ . ပေါ်လာတဲ့အကွက်မှာ I accept to the above ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Next ကို နှိပ်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ ကိုတင်ထားတဲ့ window ကို ရွေးပါ . ရွေးပြီးတာနဲ့ ဟိုဖက်အခြမ်းက GO Go GO ဆိုတာတွေက download လုပ်ဖို့ link တွေပါ . ပုံနဲ့ မရှင်းပြတော့ဘူး . မနက်ကျမှ ထပ်တင်ပေးမယ် . အချိန်မရှိတော့ဘူး . Office ပိတ်တော့မယ် .
Posted by ညီနေမင်း at 7:30 AM
Labels: Answers, errors
ning ၀ဘ်ဆိုက်မှာ မြန်မာလို ပြောင်းကြည့်မယ်
Thailand ဟန်းဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် ဘယ်လိုချိတ်ပြီး သုံ...
အထူးအစီအစဉ် (၁) Dreamweaver CS4
ကဲ သူများ ning လို့ ဒို့လဲ လိုက် ning ကြစို့
I 'm so sick
Adobe Lightrooms (portable)
Download Manager (Portable)
X-Men Origins : Wolverine (2009) DVDRip (700MB)